Kaabineen naannoo Oromiyaa dambii bulchiinsa invastimantii raggaasise – Fana Broadcasting Corporate
Kaabineen naannoo Oromiyaa dambii bulchiinsa invastimantii raggaasise
Finfinnee, Fulbaana 8, 2012(FBC)- Kaabineen bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa dambii bulchiinsa investimentii naannichaa irra deebiin fooyyessuuf qophaa’e raggaasise.
Kaabineen bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa walga’ii idilee bara hojii 5ffaa waggaa 5ffaa isaa kaleessaa Fulbaana 07, 2012 geggeessera.
Walga’ichaanis wixinee dambii bulchiinsa investimentii naannichaa irra deebiin fooyyessuuf qophaa’e irratti mari’achuun raggaasiseera.
Dambicha irra deebiin fooyyessuu kan barbaachiseef investimentiin sadarkaa misooma naannoo deggeruu fi ummata fayyadamaa taasisu akkasumas ga’ee investimentiin dinagdee naannichaa keessatti qabu fooyyessuu fi investimentii harkisuu irratti kan xiyyeeffatedha.
Keessumatti qonnaan bulaan investimentiif lafa isaa irraa buqqa’u beenyaan kaffalameefii geggeeffamuu qofa otoo hin taane investimentii keessatti sheerii qabaatee fayyadamaa akka ta’u haala kan mijeessudha.
Qonnaan bulaa fi horsiisee bulaa adda duree ta’an fi waldaalee IMX ce’an gara misooma investimentiitti akka dhufan haala mijeessuu irrattis kan xiyyeeffatedha.
Investimentiin naannoo keessatti geggeeffamu carraa hojii uumuun fayyadamummaa hawaasa naannoo mirkaneessuu keessatti ga’ee isaa akka ba’us ni taasisa.
Gama biraatiin dambichi bulchiinsa investimentii irratti hanqinoota turan bu’uura irraa furuun lafa investimentii karaa bu’a qabeessa ta’een faayidaa irra akka oolu taasisuu irratti kan xiyyeeffatedha
Adeemsa kenninsa eyyama investimentii harkifataa ta’e fooyyessuun tajaajila saffisaa kennuun investimentii naannichatti harkisuu akkasumas hirmaannaa hawaasni naannoo investimentii keessatti qabu akka fooyya’u haala mijeessuuf dambicha irra deebiin fooyyessuun barbaachiseera.
Hojimaata fi bulchiinsa lafa investimentii waliin walqabatee hudhaalee mul’atan furuun qindoomina qaamolee hojicha keessatti qooda fudhatanii cimsa.
Bu’uuruma kanaan kaabineen naannichaa wixinee dhiyaate irratti bal’inaan erga mari’atee booda dambii bulchiinsa investimentii naannichaa irra deebiin fooyyessuuf qophaa’e lakk 208/2012 ta’ee akka ragga’u sagalee guutuun murteessuusaa BDhKMNO beeksiseera.
Manni Maree Naannoo Kibbaa booruu jalqabeet yaa’iisaa gaggeessa
Obbo Gadduun, walitti qabduu koree qoqqobbii Sudaan Kibbaa waliin mari’atan
Oromiyaan barana makaanaayzeeshinii, jallisii fi horsiisa irratti xiyyeeffachuun…
Namoonni ajjeechaa Waxabajjii 15tin shakkaman, wabiidhan hiikaman